Kitrotro: 13 ny distrika mbola ahina | NewsMada
Kitrotro: 13 ny distrika mbola ahina
Par Taratra sur 11/04/2019
Mahatratra 122 840 ny olona voan’ny aretina kitrotro, nanomboka ny 3 septambra ka hatramin’ny 3 avrily, araka ny tatitra nalefan’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka, omaly. Hatramin’ny 27 marsa lasa teo, 121 521 ny isan’ny mararin’ny kitrotro voatily. 1 319 ireo olona vaovao nisehoan’ny aretina tao anatin’ny herinandro. 13 amin’izao fotoana izao ny distrika mbola ambony ny tahan’ny olona voan’ny kitrotro ahitana ny 47% amin’ireo marary. Distrika efatra amin’ireo 13 ny efa nanaovana hetsika fanaovam-baksiny miaro amin’ny aretina kitrotro tamin’ny andiany roa (Antsirabe, Antsiranana I-II ary i Nosy-Be).
Efa nifarana ny zoma lasa teo ny fanaovam-baksiny andiany fahatelo amin’ny distrika 67. Tsapa fa efa nidina ny isan’ny olona voan’ny aretina kitrotro taorian’ny fanaovam-baksiny indroa miantoana ary nofenoin’ny andiany fahatelo farany teo. Mitohy ihany koa ny fanaovam-baksiny mahazatra iarovana amin’ireo aretina azo sorohina amin’ny vaksiny eny amin’ny CSB.
Hamafisina amin’ny hetsika “Herinandron’ny fahasalamana ho an’ny reny sy ny zaza” ny tolotra fahasalamana, indrindra ny fanaovam-baksiny hanatrarana ny tanjona ka hihoatra ny 90% ny tahan’ny fandrakofana manerana ny Nosy.